19 / 09 / 2019 | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
Ụbọchị: 19 September 2019
Anyi choro ka obi ebere nke Chineke nyere ndi n’enyu anyi ihe furu efu na ndu Bilecik Train
Ndị mmadụ na-amụ, na-eto, na-ebi ma na-anwụ. Ihe di nkpa ma bara ezigbo uru n’ebe a bu mmadu mmadu n’enwe ndu ya na omume ya n’uche a. Ndụ nke ndị ọrụ aka anyị na-anwa ịme ọrụ ha n'ụzọ kachasị mma na mpaghara mpaghara square mita 3 na-ekwughị ụbọchị ehihie na abalị [More ...]
Mkpoko nke Kardemir bidoro taa
Kardemir Karabük Iron na Iron Industry na Trade Inc., (KARDEMİR), dịka afọ ọ bụla, afọ a na-emepe ọnụ ụzọ ya nye ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị maka ọrụ ọzụzụ. Mụ akwụkwọ 120 na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na-arụ ọrụ na Karabük, taa oge 2019-2020 na ụlọ ọrụ anyị [More ...]
Kocaeli Science Center na TEKNOFEST
Maka oge mbụ n’afọ gara aga, 550, ihe omume ụgbọ elu ụwa nke abụọ kachasị elu nke nwere ihe karịrị otu puku ndị ọbịa, naanị otu ememme a na-akwụsị akwụsị bụ TEKNOFEST Aviation, Space na Teknụzụ Teknụzụ amalitela. Omenala Ndị njem Kocaeli na Obodo Ndị njem nleta [More ...]
TransportationPark, onye enyemaka nke Kocaeli Metropolitan Obodo mepere mgbanye ọzọ na ọdụ ụgbọ ala ahụ na ntinye chọrọ Ogige Yahya Kaptan Yahya Kaptan na ọpụpụ. Emeghere Turnstile iji mee ka ụmụ amaala nwee ike ịbanye na ọpụpụ ọdụ ọdụ ka mfe. Wepụta [More ...]
Nọmba nke Ebe Centlọbulkart Nọmba
Obodo Obodo ukwu nke Istanbul emeela ọtụtụ usoro iji belata ike nke kaadị kaadị na Istanbul. Onu ogugu nke ulo ntinye ihe ga-abawanye tupu ngwụcha October. IMM, Istanbulbulkart nke ndi obodo Istanbul, ndi rite uru site na ngbanye ego na njem njem nke ọha [More ...]
Ihe ọghọm ụgbọ oloko na laini YHT na Bilecik, 2 Mechanic Lost
Bilecik merụrụ ahụ n'ihi mbibi nke ụgbọ oloko ahụ n'ọwara gburu ndị ọrụ igwe abụọ. Na-amalite site na Ankara, Eskişehir-Alifuatpaşa-Eskişehir Y Highksel High Speed ​​Train (YHT) maka njikwa nke eriri mgbatị eletrik 68059 Nke, na ụzọ azụ [More ...]
SAMULAŞ Ọrụ 'Ndụ Nzoputa'
Ndi Samsun Metropolitan Obodo SAMULAŞ, 'Enyemaka mbu na-azoputa ndu' nke ndi oru maka 'akwukwo izizi mbu. Ndị ọrụ 40 nke mbụ natara ọzụzụ enyemaka mbụ [More ...]
Aha ụlọ ọrụ na-agbanwe na Bursaray
Ọ dịghị ngbanwe ịgbanwe aha ndị emebere n'etiti ndị mmadụ, mana ọ dị mkpa na nke a. N'ihi na aha otu mpaghara ebe ụzọ ụgbọ okporo ụzọ abụọ ahụ si bụrụ nke mbụ abụrụzie nnukwu mmebi. Enwere ọnọdụ dị otú ahụ n'ọtụtụ nkwụsị nke Bursaray. [More ...]
ISAF 17-20Otember na-ebido na 2019 na Ebe Ngosipụta Istanbul!
ISAF 17-20Otember 2019, nke bụ isi okwu nzukọ na nchekwa, nchekwa ọrụ, ọkụ, Smart Building na Cyber ​​Security na-ele anya afọ niile, ga-emepe na Istanbul Expo Center! Nnukwu sectoral nke Eurasia bụ ISAF Fairs 23. [More ...]
Mayor Guler 'Anyị na-atụle Samsun Sarp Railway'
Onye isi obodo nke Ordu Obodo Mehmet Hilmi Guler, Wenezde ka Bolaman kwuru na akụkọ gbasara ụzọ ụgbọ oloko dị mma, kwuru, sị: "Anyị gwara onye ozi ikpe azụ ka ọ gaa n'akụkụ ngalaba nke okporo ụzọ," ka o kwuru. Nzukọ kwa ọnwa [More ...]
Obodo polanlıurfa polanlıurfa nyochara ndị njem na ụgbọ mmiri na-akụ azụ na ọdọ mmiri Atatürk na Birecik Dam. Emere Halfeti, Birecik, Bozova, Hilvan, Siverek nke ndị njem na ụgbọ mmiri azụ na-enyocha mmiri dị kwa afọ. Sanliurfa dị ka oge nyocha si dị [More ...]
Diyarbakir Metropolitan Municipality Street Construction Mmezi na Nchịkwa Akụrụngwa Njikọ, a na-arụzi obodo site na okwukwu ndị na-adịghị emebi ma ọ bụ ndị mebiri emebi. Diyarbakır Obodo na-aga n’ihu n’ọrụ ya maka nchekwa nke ndị ji ụkwụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala. [More ...]
Emegoro ndi Minista nke ationgbọ njem na akụrụngwa iji chọpụta ọnọdụ metụtara nnyefe, nnweta na imecha usoro usoro njem ụgbọ ala nke obodo, ụzọ ụgbọ oloko na akụrụngwa ndị metụtara ya. N'ihi ya, Gebze Organised Industrial Mpaghara dị na Kocaeli [More ...]
Oge ntụgharị na TenBEL Tenders
Ordu mepere emepe na ụlọ ọrụ ya na ORBEL na-ekwupụta ọkwa ha na weebụsaịtị iji hụ na usoro nke ụlọ ọrụ na-agbaso ụkpụrụ nke nghọta. “MAKA ONWE GARARA NA-EKWU PANTA PUTA Ordu kwuru na ha na-ejikọta oke mkpa iji gosipụta nke ọma na nchịkwa obodo. [More ...]
5 Star Hotel na Çambaşı Plateau
Hotellọ oriri na ọ starụ starụ kpakpando 5, nke a malitere n'okpuru nduzi nke ORBEL A.Ş., onye enyemaka nke Ordu Metropolitan Municipality, na Ordu Industrialists and Associationmen Association (ORDUSİAD) nke Çambaşı Yatırım A.Ş mere, na-aga n'ihu na-akwụsịghị akwụsị. EK GA-AHIS THEBỌR BAR AH OF BANYERE EGO [More ...]
RayHaber Ozi Ntanye 19.09.2019
Czụta Oge opupu ihe opupu nke ụgbọ ala na Cable Car NewsRayHaber 25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Enweghị ndekọ ndekọ dị nro maka 25.01.2019 na sistemụ anyị.RayHaber 04.02.2019 Tender Bulletin 04 / 02 / 2019 ndekọ ọ bụla dị nro nke 04.02.2019 ụbọchị na sistemụ anyị [More ...]
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç, Mgbapụ Njikwa European dịka akụkụ nke ihe omume ndị na-eto eto iji gbaa, ma ndị niile bi na Kayseri "Bike, mee egwuregwu," ka ọ kpọrọ. Mayor Büyükkılıç kwusiri ike na 500 puku mmadụ na-eme egwuregwu kwa afọ. [More ...]